Waxaan jeclahay oo dhan videos daawashada dhex VLC ciyaaryahan laakiin sida badan idin ​​VLC loo isticmaalo si dhab ah? Haddii aad loo isticmaalo awoodaha VLC ay u dhan, aad Hubaal la yaabay waxa aan samayn karo. Mid ka mid ah hawlaha VLC waa in ay laba jibaar kartaa sida editor video aad.
VLC waa software ah ciyaaryahan warbaahinta awood badan iyo hal abuur leh ma aha oo kaliya ciyaara files warbaahinta, laakiin siinayaa shaqeynta ee software tafatirka. In kastoo aanay ahayn sida awood badan sida tafatirka heerka caymiska software u user celcelis ahaan, waxa aanu shaqada. Waxaad jari karaa, darsamaan, ku dar saamayn iyo abuuro xiiso videos. Halkan waxa ku jira saddex functionalities tafatirka aasaasiga ah ee VLC
Hadda, feature beddesha ay tahay mid waxtar leh sida qalabka kala duwan waxaa loo isticmaalaa in lagu soo qabto videos. Iyadoo ku dacwaysay fiidiyo ama telefoonka, video laga yaabaa in qaab sawirka duubay iyo ciyaaro video isla PC tusi doonaa sirgaxan 90 malaa'ig. Sidaa awgeed, waa in isku shaandheyn si ay u watchable.Here waa sida aad isku shaandheyn karaa video on your computer:
1. Fur file ee VLC media player oo taga si qalabka. Under qalab Raadka furan iyo safeeyuhu.
2. Marka ay wada-hadal la furo sanduuq, tag tab Video Raadka, waxaad tagtaan dalka ka bedelaan oo sax. Dooro heerka ku haboon wareeg ku xiran tahay nooca hadda ee video ah. Waxaad isku shaandheyn karaa video by 90-degree counter saacad ama u socoto.
3. Haddii aad rabto in aad isku shaandheyn by xaglo kala duwan, taas oo ah wax ka yar ka badan 90 darajo ama, waxaad isticmaali kartaa Joometri tab.
4. Hadda, video waxaa la ciyaari doonaa jidkii aad doonayso in aad.
Tallaabooyinka kor ku xusan waa isku mid labada Mac iyo Windows version of VLC inkastoo interface ee Mac waa wax yar oo kala duwan.
Goynta video ah waa arrin weyn ee tafatirka iyo VLC ku siinayaa wanaagsan shaqeynta goynta video. User Celcelis ahaan jari karaa qayb ka mid ah oo ka mid ah video . Waxaad jari karaa qayb jecel video iyo badbaadiyo ama la saaxiibada iyo qoyska wadaagaan. Waa kuwan tallaabooyinku on jarida video isticmaalaya VLC:
1. Fur video aad rabto in aad la gooyaa oo taga si aad u eegto menu oo u furan gacanta ku Advanced.
2. Hadda maraan si ay qayb ka aad rabto in aad ka gooyay. Marka aad bar bilow ah oo video ah, guji badhanka diiwaanka.
3. Hadda ciyaari video ama u guuraan waxaa jire by jir ilaa aad gaadho dhamaadka. Hadda riix badhanka cas oo mar kale si ay u joojiyaan qoro. Your video badbaadi doonaa folder Videos My ama default video mooyee folder on your computer.
Dhammaan tallaabooyinka waa isku wada mid ah daaqadaha iyo Mac version of ciyaaryahan VLC ah.
Waxaad ku milmaan karo files badan galay mar la isticmaalayo VLC. Si kastaba ha ahaatee, waxaad u baahan doontaa files la qaab la mid ah ka hor inta iyaga ku biirtay. Waxaad mar walba isticmaali kartaa doorasho qarsoon ee VLC si loogu badalo files si ay qaab la mid ah. Waa kuwan tallaabooyinku waa inaad tixgelisaa inaad ku biirto laba ama in ka badan files galay mar.
1. Daahfurka VLC Media Player oo taga si Menu Media. Laga soo bilaabo menu, guji files Multiple Open.
2. suuqa kala socda, si ay u tagaan tab File iyo guji add ku darto files aad rabto inaad ku biirto. Ka hor inta ku daray hubiyo in dhammaan faylasha waxay leeyihiin qaab isku mid ah. Ku rid isku xigxiga sida aad u rabto in aad iyaga u ciyaaro.
3. Hadda, u tag Play iyo furi dhibic ka hoos liiska guji Converter si loo badbaadiyo faylka.
Qaabkan waxaa kaloo waa isku mid labada Windows iyo Mac ka hawlgala nidaamka laakiin Mac leeyahay interface u gaar ah.
> Resource > Video > Sida loo Isticmaalo VLC sida Video Editor ah?